Hiaraka hiasa amin’ny ASTRAM izy ireo manomboka izao, fikambanana iray mifototra amin’ny fikarohana ireo zava-maniry eto Madagasikara havadika ho fanafody mampitombo ny hery fiarovana sy manasitrana. Ny fikambanana no handray an-tanana ny fivarotana izany, raha ny ASTRAM kosa no mpamokatra azy izay miainga avy any Farafangana. Raha araka ny tafa nifanaovan’izy ireo tamin’ny mpanao gazety omaly dia ny ravintsara sy ny kininim-potsy no akora fototra hampiasain’ny ASTRAM. Ankoatra ny menaka fanosotrona araka izany dia hamokatra karazam-panafody maro loha izy ireo hanampiana ny vahoaka Malagasy amin’izao ady hatao amin’ny coronavirus eto amintsika izao. Tsiahivina moa orinasa lehibe mijoro ara-dalana ny ASTRAM.